Manao diamondra sentetika - hosoka - Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Manao diamondra sentetika - hosoka
Aza andramana ao an-trano fa sandoka izany
Androany Instructables Hitako ity lahatsoratra ity izay nahasarika ny saiko, izay ahitana ny fomba fananganana diamondra TENA misy akora namboarina. Alohan'ny hahitan'ny olona ny mason'ilay dolara dia holazaiko fa na dia tena izy aza izy io dia kely dia kely ka tsy azo ampiasaina hivarotra azy. Miverena amin'ny fiainana tena izy, amin'izay tokony hiasanao hahazoana vola kely ^ _ ^
Isika dia mila:
Kopa 2 (Haben'ny kafe)
Fitaovana grafitera 3 (pensilihazo mekanika, 3mm)
Sombin-kofehy landihazo 100%
Te-haneho hevitra aho fa somary sarotra ny mahita ny kofehy, saingy avoaka IZAO fa tokony ho 100% landihazo, raha tsy izany dia mety tsy hahomby
Inona no hataontsika
Ny ezahinay atao dia ny manafana ny toeram-pitrandrahana grafit mankany amin'ny fanjakana Plasma mba hamoronana ilay diamondra. Izany dia mitaky fa ny micro-REHETRA rehetra dia mifantoka amin'ny fotoana iray. Ny hataontsika dia aloharoina amin'ny kofehy ny kofehy ary avy eo manodidina ny grafit miaraka aminy:
Aorian'izay, apetrakay eo ambonin'ireo bara roa hafa ny grafitantsika miaraka amin'ny Cotton in Oil
Manarona ny kaopy izahay, mifanohitra amin'ny iray hafa ary mametraka azy ao anaty microwave. Mametraka ny fotoana faran'izay betsaka izahay, dia hovonoinay rehefa mahita
Ao amin'ny microwave
Raha vantany vao napetraka amin'ny fotoana sy hery farany ambony ny kaopy sy ny microwave, dia ampodintsika io. Hetsika kely vitsivitsy no hitsambikina voalohany, noho ny menaka, tokony hijanona afaka minitra vitsy izy ireo Rehefa lasa ny fotoana dia tokony ho ampy ny minitra maromaro na latsaka ao anatiny dia hanana ny diamondra isika. Ny sisa tavela dia ny mitady azy eo amin'ny grafita marobe;)
[nasongadina] Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i roobre ho an'i Ikkaro [/ nisongadina]
Sokajy Lohahevitra hafa Tags Mpihaza sandoka Ticket navigation
SODIS Fomba famonoana rano amin'ny masoandro
Fanehoan-kevitra 29 momba ny «fanaovana diamondra sentetika - hosoka»
28 Jona 2009 amin'ny 2:14 hariva
Andao hojerentsika, efa nisy olona nanao an'io fanandramana io ve feno?
Heveriko fa tsy misy na ny mpanoratra aza tsy nanao an'io.
Ka maninona ianao no milaza fa sandoka izany?
Sendra ny zavatra hafahafa noho io ...
Azafady, atsaharo ny fitsikerana ny tranokala Ikkaro (na Roobre mahantra izay mitondra atiny ho antsika amin'ny fikasany tsara rehetra) ary, na izany na tsy izany, mankanesa any Lahatsoratra voalohany azo ampianarina ary mitsikera izay rehetra lazainao eto amin'ny mpanoratra tany am-boalohany ny sandoka (azo antoka mrcrumley).
Fantatro fa sarotra ny miala amin'ny tontolo majika ahafahanao manao diamondra ao an-trano mankany amin'ny tena fiainana, fa tsy misy antony tokony hahatezitra izany.
Manantena aho fa maro amin'ireo izay naneho hevitra tamin'ity lahatsoratra ity tamin'ny anaram-bosotra sandoka hanafina azy noho ny tahotra ny tsikera no hisaintsaina.
28 Jona 2009 amin'ny 4:12 hariva
Toa tsara tamiko izany satria fahasoavana kely foana no mora ampiasaina
Jo faly aho nanao XD diamondra ahy manokana
Carlos, marina ny anao
28 Jona 2009 amin'ny 6:19 hariva
Andao hojerentsika, ity lahatsoratra ity dia toy ny sangisangy, tsy mila tezitra ianao, raha tsy tianao izany, hajaiko ny hevitrao. Misaotra Carlos, raha tsy mahita ny hafatrao aho dia halefako ny lahatsoratra XD Na izany na tsy izany, raha heverinao fa tsy fanararaotana izany dia hesoriko ary faly daholo ny olona, ​​sa tsy izany? Mirary ny soa indrindra
28 Jona 2009 amin'ny 6:34 hariva
Ankoatr'izay, ity dia ohatra tsara iray izay tsy tokony hinoantsika izay rehetra hitantsika amin'ny tambajotra, fa hampahafantatra tsara ny tenantsika alohan'ny xD
Heveriko fa tsy tokony hesorinao amin'ny Internet ity lahatsoratra ity ;-)
Aza manahy momba ny fitsikerana an'i Roobre, misy hatrany ny olona maneho hevitra manimba: -S
29 Jona 2009 amin'ny 1:10 hariva
Ny masonkarena toa izao indrindra no notondroiko tamin'ny hevitra nataoko teo aloha.
@Carlosgs: Raha milaza ny lehilahy fa afaka mamaky ny soratra Canal + amin'ny alàlan'ny fametahana bateria 1,5V amin'ny tariby antena amin'ny alàlan'ny foil volamena dia tsy mila mandinika ianao raha mahita fa fitakiana diso izany. Misy hosoka latsaka amin'ny lanjany ihany. Arakaraka ny hahalalanao ny fizika na ny elektronika no hahasarotanao ny famantsihana azy.
Miorina tsara ny tsikera: ity tranonkala ity dia mety hanaparitaka siansa ary miaraka amin'izay dia misy fizarana mampihomehy, avahana mazava tsara, izay ahafahantsika rehetra mihomehy amin'ny tsy misy dikany toy ny fanaovana diamondra ao anaty microwave tsy misy fanahy madio (tsy misy fanafihana fanahy) mety hieritreritra fa mety hivadika ho marina, na mbola ratsy kokoa noho izany aza, fa manaporofo izany, amin'ny maha andrana fanandramana mampidi-doza azy ity noho ny mety hisian'ny taratra mikraoba any ivelany, na ny fiharatsian'ny fatana azo antoka. Na toy ny fanaovana popcorn amin'ny findainao; ny roobre mihitsy dia manome soso-kevitra fa raha mamoaka mikraoba ny finday dia mahandro ny atidohantsika. Mampalahelo fa ny soso-kevitra fotsiny no atoro azy io fa tsy ny fanamafisana azy, satria porofo izany: tsy masaka ny ati-dohantsika. Raha te hipoaka ny voam-bary, dia mila mahatratra 175º eo ho eo izy io. Amin'ny 40º, manomboka miaritra hallucination ny ati-doha, ary amin'ny 42º, misy fahasimbana tsy azo ovaina. Mila mitsapa ny fanandramana ve ianao mba hampisehoana fa diso izany?
29 Jona 2009 amin'ny 1:11 hariva
Pijus Erectus nilaza hoe:
Miala tsiny, adinoko ny nanao sonia ny hevitro teo aloha.
29 Jona 2009 amin'ny 1:38 hariva
Mankato ny fitsipika iray foana aho ary izany dia tsy azoko antoka mihitsy na oviana na oviana 100% na inona na inona, mamoaka mikraoba ny finday, saingy tsy ampy hanafanana rano, efa mazava izany.
Etsy ankilany, tsy ratsy indraindray ny miala kely amin'ilay lohahevitra ary manome taratra kely ny zava-drehetra, raha tsara ny mahita hoe iza no nanaikitra, na iza no nahatsikaritra, fa tsy ilaina ny tsy fanajana ahy na izaho na ilay mahalala kely noho ianao.
Aza adino fa amin'ny maha-bilaogy ity pejy ity, ny olona dia nataon'NY OLONY, isika dia subjectif ary tsy azo vinavinaina ^^
30 Jona 2009 amin'ny 1:21 maraina
Eny, mimenomenona ny rehetra fa tsy misy manome safidy bebe kokoa, angamba tokony hanao fanandramana hafa isika, raha efa hitan'izy ireo ny fanaovana diamondra mini miaraka amin'ny tequila, tsy fantatrao mihitsy
16 Jolay 2009 amin'ny 12:38 maraina
Tokony ho mafy orina ianao hino an'io, ny fanerena hahazoana diamondra dia avo dia avo, ary ankoatr'izay dia mila manome diamondra ianao dia tsy mandeha ho azy
14 Aogositra 2009 amin'ny 1:51 maraina
Heveriko fa tena marina ny nosoratan'ilay olona voalohany (izany hoe ny hevitra voalohany)!
30 Aogositra 2009 amin'ny 1:45 hariva
Tao amin'ilay programa fanta-daza dia nanandrana fomba isan-karazany nalaina tamin'ny Internet izy ireo mba hanaovana diamondra, nahafinaritra ilay programa, ary rehefa tsy nahomby tamin'ny "rafitra" maro toa izao dia nahomby ...
Saingy mitranga amin'ny laboratoara ivelany izy io, miaraka amin'ny grafite ary heveriko fa tadidiko fa 2000Kg ny baomba naterak'izany, ny vokatr'izany? "Ratsy" diamondra kely, izany hoe ho an'ny indostrialy (fanapahana, fikosehana ...)
Tsy hitako tao amin'ny youtube ilay horonan-tsary
27 Desambra 2009 amin'ny 9:11 maraina
Ny olana dia tokony ho nampitandrina ianao avy eo fa sangisangy fotsiny amin'ny Andron'ny Adala amin'ny Aprily, satria olona mihoatra ny iray no mety manimba ny micro-vitany amin'izany, satria saika tsy misy mahalala ny fomba famoronana diamondra amin'ny toe-javatra voajanahary sy amin'ny toe-piainana artifisialy. Mila hery sy tsindry bebe kokoa noho ny be dia be, angamba mikraoba an-jatony miaraka hanao diamondra kely (vovoka diamondra mihoatra na latsaka) izay ampiasaina amin'ny fitaovana sy andrana hafa ihany.
31 Desambra 2009 amin'ny 5:08 alina
Manantena aho fa tsy misy zaza na olon-dehibe hendry nanandrana nanao an'ity fanandramana ity, dia tokony hanana saina mahazatra ianao ary hampitandrina fa vazivazy ity.
Aza milalao amin'ireo zavatra ireo: /
29 Janoary 2010 tamin'ny 8:24 maraina
salami izy ireo hahaha mindfreak
16 Febroary 2010 amin'ny 6:48 hariva
Inona no mety hitranga raha tsy ny firaka no ataontsika eo amin'ny toeran'ny pensilihazo?
28 martsa 2010 amin'ny 2:18 hariva
Misy fomba maromaro hahazoana diamondra fa tsy fantatro fa misy fomba namboarina.
17 aprily 2010 amin'ny 11:11 hariva
AHOANA NO NAMORANAO NY BAIBOLY DIAMOND ……
XQ NANANANANARANA MBOLA NATAO IZANY ARY VOAFAN'NY TRANO VOAFAHANA …… AZONAO VOAFITRA MANAMPY ANTSIKA ESQ dia tetik'asa ho an'ny sekoly… ..
1 Aogositra 2010 amin'ny 10:48 hariva
Raiso ny miora, arotsaho amin'ny vilany varahina, vifotsy na inona na inona mandra-pahatonga azy ho arina, manasa azy ianao ary misy ny kristaly diamondra, saika ny zavatra rehetra dia avy any, na inona habe tianao.
Nantsoin'i Ptolemy ho fanananay izy io satria nantsoina hoe My Ra na Andriamanitro = miora
izany dia fombam-pivavahana masina = siansa marina, ampiasao toy izany
Azonao atao ny manao ny sary, ary manadihady azy ireo koa ianao.
miasa ihany koa ny olon-kendry hafa
ny kolontsaina dia mifototra amin'ny fanaparitahana fahalalana manaparitaka azy
Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia naniry hanome azy divay misy miora izy hampitony ny fanaintainany, ary tsy nomeny miora aho, izaho no miora,
atombohy amin'ny famakiana ny alina iray alina, cinderella, lanezy fotsy, ny koran, ny Baiboly, sns ...
Tsy alchemista na siantista aho fa CHARLATAN
3 Aogositra 2010 amin'ny 1:01 maraina
28 Jona 2009 amin'ny 12:50 maraina
Tiako i Ikkaro rehefa mamoaka fanandramana tena izy, na an'ny azy na an'ny an'ny antoko fahatelo. Ny siansa malaza dia lalao matotra tokoa, ary ny lafiny filalaovana fanandramana ao Ikkaro dia tena mahasalama. Saingy ny fanolorana sandoka izay mamindra azy ireo ho tena izy, na mampisy fisalasalana amin'ny mpamaky, nefa tsy nampifanohitra azy teo aloha, dia mitovy amin'ny fanambarana sy ny fiderana an'i Iker Jiménez.
Ny olona tsy dia mifoha dia afaka manandrana mamerina ity andrana ity any an-trano, mampidi-doza tokoa ny mamela ny microwave miasa ao anaty banga (tsy misy zavatra lena ao anaty ny mikraoba mandray ny taratra). Ny tsara indrindra, dia hodorany fotsiny ilay lalao alohan'ny hiverenan'ny 99 minitra tsy misy dikany.)
Farafaharatsiny apetaho ao amin'ny faritra mampihomehy. Na dia tsy mahatsikaiky aza, tena. Fa momba ny tsiro, ny loko.
2 Inona no hataontsika
3 Ao amin'ny microwave